မှတ်သားဖွယ်ရာ ဗဟုသုတအဖြာဖြာ - Thutazone
(ဓာတ်ပုံများအတွက် မူရင်းတင်ထားသူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်)
ကြယ်တံခွန်ဆိုတာ ကီလိုမီတာအနည်းငယ်ပဲထူထဲတဲ့ ကျောက်သားအကြေအမွတွေ ၊ ရေခဲအကြေအမွ တွေဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကိုယ်ထည်ကြီးဖြစ်တယ်။ သူက နေနဲ့အနီးကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာ ပူလာတယ်။ ရေခဲတွေက ဓာတ်ငွေ့တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ ဖုန့်မှုန့်အပိုင်းအစတွေကို အာကာသထဲဆွဲထုတ်ပစ်တယ်။ နေမှပျံထွက်လာတဲ့ အမှုန်လေးတွေစုထားတဲ့ တိမ်တိုက်တွေဟာ (အာကာသထဲရှိလေကြောင့်)သူ့ဓာတ်ငွေ့တွေကို နောက်ဘက်တွန်းထုတ်ပြီး ဖုန်မှုန့်တွေနဲ့အမြီးတန်းအဖြစ် ဖွဲ့စည်းထားလိုက်ပါတယ်။
နေရဲ့အနားကဖြတ်ပျံနေစဉ်မှာ အဲဒီဥက္ကာခဲရဲ့အမြီးတန်းကသိပ်လှတယ်။ အမြီးတန်းဟာကီလို မီတာသန်းနဲ့ချီပြီး ရှည်လျားနိုင်တယ်။တစ်ချို့အမြီးတန်းတွေက သိပ်ကိုပါးလွှာတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ကမ္ဘာ့အနီးမှဘေးဒုက္ခမပေးဘဲဖြတ်ပျံသွားတဲ့ ဟေလီကြယ်တံခွန်ရဲ့ အမြီးဟာ သိပ်ကိုပါးလှပ်ပါတယ်။
ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာဟာ အနိမ့်ဆုံးအနက် (၄၀၅၀)မီတာနဲ့ အမြင့်ဆုံးအနက် (၁၁၀၃၀) မီတာရှိပြီး အနက်ဆုံး ဖြစ်တယ်။ နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဟာအနိမ့်ဆုံး (၃၉၀၀) မီတာနဲ့အမြင့်ဆုံးအနက် (၉၂၀၀) မီ တာရှိတယ်။ အတ္တလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာကတော့ အနိမ့်ဆုံးအနက်(၃၃၀၀) မီတာနဲ့အမြင့်ဆုံးအနက် (၉၂၀၀)မီ တာ၊ အာတိတ်သမုဒ္ဒရာကတော့ အနိမ့်ဆုံးအမြင့်ဆုံးအနက် (၅၅၀၀) မီတာရှိပြီး မြေထဲပင်လယ်ကအများဆုံးအနက် (၅၁၂၀) မီတာနဲ့ အနည်းဆုံးက (၁၀၀၀) မီတာရှိတယ်။ ပင်လယ်နက်အစုအဝေးရဲ့ အောက်ခြေက ဘောလ်တစ်ဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံးအနက်က (၄၆၀) မီတာ ရှိပြီး မြောက်ဘက်ပင်လယ်ကတော့ (၉၁-၁၀၀) မီတာနက်တယ်။
လျှို့ဝှက်စာရေး နည်းပညာဆိုတာ စာလုံးတွေ စီရမယ့်နေရာမှာ ကိန်းဂဏန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီး လျှို့ဝှက်စာတမ်းတစ်စောင်ရေးဖွဲ့တဲ့ အနုပညာတရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အက္ခရာစာလုံး အသီးသီး အတွက် သီးခြားအထူးပြုစီမံထားတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေပေးထားပြီး စကားဝှက်စာတစ်စောင်ရေးဖွဲ့ရပါတယ်။ ဒီလျှို့ဝှက်သင်္ကေတကို ဆိုက်ဘာစကားဝှက်လို့ခေါ်ပါတယ်။ စကားဝှက်ပုံစံနှစ်မျိုးရှိတယ်။ သတင်းပေးပို့လွှာမှာပါတဲ့ စာလုံးအသီးသီးအတွက် ကိန်းဂဏန်း၊ စာလုံးသင်္ကေတ တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ အစားထိုးရေးသားခြင်းမျိုးလည်းရှိပါတယ်။
ဒုတိယအမျိုးအစားကတော့ သတင်းလွှာမှာပါတဲ့ စာလုံးလေးတွေကို နေရာအထားအသို အစီအစဉ်များ ပြောင်းလဲပစ်ခြင်းများဖြစ်ပါသည်။ ဒီလိုနည်းလမ်းနှစ်သွယ်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ နည်းမျိုးစုံအသုံးပြုကြတယ် ။ ပေးပို့သူူနဲ့ လက်ခံသူနှစ်ဦးစလုံးမှာ သင်္ကေတနဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကို ဖော်ထုတ်နိုင်မယ့် သင်္ကေတအညွှန်းစာအုပ် ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။
KLM (Kiss Me, Leave Me, Miss Me) သည် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးစီးပွားဖြစ်လုပ်ကိုင်သော လေကြောင်းလိုင်း ဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၈၀) ကျော်ကတည်းကပြေးဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုနယ်သာလန်နိုင်ငံမှ ဒက်ချ်လူမျိုး လေယာဉ်မှူး အဲလဘတ်ပလီစ်မန်းက စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဲလဘတ်သည ်KLM လေကြောင်းလိုင်းကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၅၃ ခုနှစ်တိုင်အောင် KLM ၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်တိုက်ကြီးငါးတိုက်မှ မြို့တော်ပေါင်း ၁၄၀၀ ကျော်တွင် KLM လေကြောင်းလိုင်း၏ ကွန်ယက်များဖြန့်ကျက်ထားပြီဖြစ်သည်။
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားခရိုင် မိုးကောင်းနယ်အတွင်း တည်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးသော သဘာဝအင်းကြီးဖြစ်သည်။ တောင်နှင့်မြောက်အလျား(၁၆)မိုင်ရှိသည်။ မိုးရာသီအချိန်တွင် အနောက်ဘက်ကမ်းရှိ လုံးတုံနှင့ ်အရှေ့ဘက်ကမ်းရှိ ဟဲမုရွာအကြား ရေပြင်အကျယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ အနံခုနှစ်မိုင်ကျယ်ဝန်းသည်။ ရေပြင်ကြီးသက်သက်အကျယ် ်အဝန်းသည်(၄၄.၉)စတုရန်းမိုင်ရှိသည်။
အင်းတော်ကြီးအိုင်အတွင်းအမှိုက်ဒိုက်သရိုက်ကင်းစင်သည်။ ရေကြည်လင်သည်။ ရေပြင်ကျယ်ကြီးသည် ပင်လယ်ပြင်တမျှ ရှုမဆုံးအောင်လှပသည်။ အင်းတော်ကြီး၏အလယ် အင်းစွယ်တစ်ခုပေါ်တွင်ရွှေမဉ္ဖူစေတီတော် တည်ထားသည်။ အင်းတော်ကြီးသည် ပတ်ပတ်လည်၌ တောင်ရိုးတောင်စွယ်များ ဝိုင်းရံထားသည့်ချိုင့်ဝှမ်းကြီးဖြစ်သည်။ ရွှေမဉ္ဖူစေတီသည် ကချင်ပြည်နယ်၏ အဓိကရစေတီတော်ကြီးဖြစ်သည်။ တပေါင်းလဆန်း ဘုရားပွဲတော်ကျင်းပချိန်နီးကပ်လာလျှင် ဘုရားစေတီအရောက် လူလျှောက်သွားနိုင်ရန် သဲလမ်းမကြီးနှစ်လမ်း ပေါ်လာတတ်သည်။ ဘုရားပွဲတော်ပြီးသည့်အခါ သဲလမ်းများ ရေထဲပြန်မြုပ်သွားတတ်သည်။ (ယခုအခါတွင်တော့ လူသွားလမ်းကို အခိုင်အမာတည်ဆောက်ထားပြီးဖြစ်သည်)
အိုလံပစ်ပွဲတော်များဘယ်အချိန်က စတင်ခဲ့သလဲ ?
ခရစ်တော်မပေါ်မီ (၇၇၆) ခုနှစ်မှစ၍ ဂရိလူမျိုးများသည် အိုလံပစ်ပွဲတော်များကို လေးနှစ်တစ်ကြိမ် ကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် zeus နတ်ဘုရားကိုပူဇော်ရန် ပန်းချီပညာရှင်များ ၊ စာရေးဆရာများ ၊ အားကစားသမားများ စုဝေးရောက်ရှိတတ်သည်။ အိုလံပစ်ပွဲဟုကျော်ကြားလာခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံး အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲများသည် အားကစားသက်သက်မဟုတ်ချေ၊ ပြဇာတ်များကကြသည်၊ ကဗျာများရွတ် ကြသည်။ ပြေးပွဲများကျင်းပကြသည်။
ဂရိလူမျိုးများအတွက် အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲများသည် စိတ်နှင့်ရုပ် ပေါင်းစပ်မှုကိုဖော်ပြပြီး zeus နတ်ဘုရားထံ အောင်ပွဲဆုတောင်းခံနိုင်သည် ဟုယူဆသည်။ အိုလံပစ် ပွဲတော်များကို (၃) ရက်ကြာမျှကျင်းပခဲ့သည်။ အားကစားသမားများသည် အပြေးပြိုင်ကြ၊ လှည်းမောင်း ပြိုင်ကြသည်။ ပွဲတော်မစမီကျမ်းသစ္စာကျိန်ရသည်။ပြိုင်ပွဲများအပြီးတွင် ဆုပေးပွဲများစားသောက် ပွဲများ ကျင်းပတတ်ကြသည်။
အပန်းဖြေစခန်းအဖြစ်ထင်ရှားသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နှင့် လေးမိုင်လောက်သာဝေးကွာသည်။ မဇင်းလေဆိပ်သည်သံတွဲမြို့နှင့်ခုနှစ်မိုင်ခန့်ဝေးသည် ။ ငပလီကမ်းခြေစခန်းသည် ရွာကလေးဖြစ်သည်။ မဇင်းလေဆိပ်မှ(၂)မိုင်မျှသာဝေးသည်။ ငပလီသည် မြန်မာစကား မဟုတ်ပေ။ အီတလီလူမျိုးတို့သည် သံတွဲမြို့အနီး ယခုငပလီစခန်းသို့ရောက်လာကြသည်။ ငပလီစခန်းနေရာသည် အီတလီနိုင်ငံရှိ နေပလီ (နေပယ်) ကမ်းခြေစခန်းကဲ့သို့အလွန်သာယာသည်။ ရှုခင်းလှသည်။ ထို့ကြောင့်နေပလီဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်း နောင်တွင်နေပလီ မှ ငပလီ ဖြစ်လာသည်ဟုဆိုသည်။
ဘားအံဆိုတဲ့နာမည် ဘယ်ကရတာလဲ ?
ဘားအံမြို့သည်ကရင်ပြည်နယ်၏မြို့တော်ဖြစ်သည်။လွန်ခဲ့ေ သာနှစ်ပေါင်း(၁၀၀၀)ကျော်ကသံလွင်မြစ် ကမ်းနဖူးတွင်စုစုပေါင်းအိမ်ခြေ ၂၀၀)ခန့်ရှိရွာလေးတစ်ရွာသာဖြစ်ခဲ့သည်။ ရွာကလေးတည်ရာသံလွင် မြစ်၏ကမ်းစွယ်တွင်အဓိကရ ကျောက်စွန်းကြီးတစ်ခုရှိသည်။ ထိုစွန်းကို ယိုးဒယား၊ ရှမ်းဘာသာဖြင့်ဖား အမ်း(ကျောက်+အစွယ်)ဟုခေါ်ခဲ့သည်။ ဖားအမ်းမှတစ်ဆင့်အသံအ နည်းငယ်ပြောင်း၍ဘားအံဟုအမည် တွင်လာသည်။ ၁၉၀၇ခုနှစ်တွင်မြို့ကွက်ရိုက်ခဲ့သည်။ ဘားအံမြို့နယ်တွင်ထင်ရှားသောတောင်သည်ဇွဲ ကပင်တောင်ဖြစ်သည်။ဇွဲကပင်ဆုတေားပြည့်စေတီတော်တည်ထားသ ည်။ဘားအံမြို့မှသံလွင်မြစ်ညာ ရှစ်မိုင်ခန့် အကွာကော့ဂွန်းတောင်၏အရှေ့ဘက်၌ကော့ဂွန်းဂူရှိသည် ။ ဘားအံ၏အနောက်ဘက်(၁၂) မိုင်ကွာအရပ်၌ဘုရင်ဂျီဂူ(ဘုရင့်ညီဂူ)ရှိသည်။ ဂူ၏အောက်ခြေတွင်ရေပူစမ်းအိုင်ရှိသည်။ ရေပူစမ်း ၊ရေ အေး စမ်းနှစ်ခုယှဉ်လျက်စီးဆင်းလျက်ရှိသော်လည်း ရေပူနှင့်ရေအေးပေါင်းစပ်ခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။
အင်းလေးကန် ဘာကြောင့်ကမ္ဘာကျော်ရသလဲ ?
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ညောင်ရွှနယ်တွင်တည်ရှိသည်။ မြစ်ကြီးနားခရိုင်ရှိ အင်းတောင်ကြီးမှလွဲလျှင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဒုတိယအကြီးဆုံးသောသဘာဝအင်းအိုင်ကြီးဖြစ်သည်။ တောင်နှင့်မြောက်တန်းလျက်ရှိသော တောင်တန်းကြီး (၂) ခုကြားတွင် ခွက်ဝင်နေသောညောင်ရွှေချိုင့်ဝှမ်းကြီး၏ အလယ် အနက်ရှိုင်းဆုံးအပိုင်း၌တည်ရှိ သည်။ အင်းလေးတည်ရာအရပ်သည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်ပေ (၂၉၀၀) ကျော်မြင့်သည်။ အင်းလေးသည ်တောင်ပေါ်အင်းအိုင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ တောင်ရိုးတောင်တန်းများဝန်းရံလျက် ကြည်လင်ြ ပာလဲ့သော ရေပြင်ကျယ်ကြီးဖြစ်သောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ တွင်သာမကကမ္ဘာတွင်ပါ ကျော်ကြားသည်။
အင်း လေးသည် တောင်နှင့်မြောက်အလျား ကိုးမိုင်ခန့်ရှည်သည်။ အကျယ်ဆုံးနေရာ၌ အရှေ့နှင့်အနောက်သုံးမိုင်ခွဲ ခန့်ရှိသည်။ ရှေးအခါက အင်းလေးကန်ကြီး၏ အကျယ်အဝန်းသည် စတုရန်းမိုင် (၁၉၀) ခန့်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ အင်းလေးရေပြင်ပေါ်တွင် ရွာကြီး ၊ ရွာငယ်များ တည်ဆောက်ထားသည်။ တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ လှေ များ ၊ စက်လှေများဖြင့်သွားလာကြသည်။ လှေကိုခြေဖြင့်လှော်ခတ်သည်။ အင်းလေးဒေသ နန်ဟူးရွာရှိ ဖောင် တော်ဦးဘုရားသည် ထင်ရှားသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)ပင်းတယမြို့သည် ဧရာဝတီမြစ်၏မြစ်လက်တက်ဖြစ်သော ဇော်ဂျီမြစ်တောင် မှမြောက်သို့ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသောမြစ်ဝှမ်း၌တည်ရှိသည်။ ပင်းတယမြို့၏အရှေ့ဘက်ပိုင်းတွင်ကုန်းမြင့် လွင်ပြင်ကြီးဖြစ်လျက်ရှိသည်။ ပေ(၃၀၀၀)ကျော်မြင့်သည်။ အနောက်ပိုင်းတွင်လည်းပေ (၅၀၀၀)ကျော် မြင့်သောတောင်တန်းကြီးရှိသည်။ ပင်းတယမြို့သည် တောင်တန်းကြီး၏ခြေရင်းတွင်တည်ရှိသည်။ အလွန် ရှုခင်းလှသည်။
မြို့အဝင်တွင် နာဂပတ္တန် ၊ ပုတ္တလုတ်ကန်ဟုခေါ်သော ပင်းတယကန်ကြီးရှိသည်။ ညောင် ကြတ်ပင်တန်း၏အရိပ်အောက်၌တင့်တယ်စွာရှိသည်။ ပင်းတယမြို့အနောက်တောင်ဘက်ယွန်းယွန်း (၁) မိုင်ခန့်အကွာ တောင်စောင်းပေါ်တွင်စောင်းတန်းအသွယ်သွယ် ရွှေရောင်တဝင်းဝင်းဖြင့်ရွှေဥမင်ဘုရားရှိ သည်။ ရွှေဥမင်ဘုရား၏ ကျောက်သားဥမင်ကြီးအတွင်း၌ ဘုရားဆင်းတုတော်များ လက်ညှိုးထိုးမလွဲအောင် များပြားသည်။
မူဆိုလီနီအား ကယ်တင်လွတ်မြောက်စေခဲ့သူ (သို့) ဟစ်တလာရဲ့ လက်ရွေးစင် သူရဲကောင်း